Qomo interactive flat panels
Qomo's new series interactive panels: Android 8.0 system and windows system optional.20 points touch and 10 points writing.Saizi inowanikwa mu55 ″ / 65 ″/75 ″ / 86 ″
Iyi All-In-One Collaboration Smart Board: Yepakati/hombe inotakurika inopindirana chena bhodhi komputa, yakakodzera kushandiswa nehunyanzvi - muhofisi, mukirasi kana kumba.
Shanda Pamwe Mumunhu kana Kure: Inotsigira akawanda mushandisi kugadzirisa pane imwechete Qomo.Robust ecosystem inobatana neyako yaunofarira maapuro.Fungidzira munguva chaiyo & dhirowa uchishandisa iyo inosanganisirwa stylus
Ongorora: Isu tinotsigira mhando yeQomo yedemo tichiri mukugadzirwa kwakawanda tinoita OEM / ODM
Zvese mune imwe panel
Batanidza Komputa, TV, chena bhodhi, Soundbar, Projector uye AD mudziyo unoshanda mune imwe
4K UHD skrini
4K UHD anti-glare LG sikirini.Yakakwirira tekinoroji kutaridzika.Yakanakisa mufananidzo wemhando.Zvaunoona ndizvo zvaunowana
Mapaneti edu anokubatsira kuti ugovane zano rako muchidzitiro kubva pafoni/notibhuku/kombuta yako, kungobatana kusina waya neEshare software mumapanera.
Interactive multi-touch nehupamhi hwepamusoro
20 pfungwa kubata.Tsigira zvese zvinyorwa zvinyorwa uye zvirevo.Kubvumira vashandisi vakawanda kupindirana panguva imwe chete.Nekubata kwakapfava uye kunodaira, chero munhu anogona kutora manotsi, kunyora uye kudhirowa pachiratidziri, zvichiita kuti kirasi ive nzvimbo yekushandira pamwe.
Huya nesoftware yedzidzo yemahara
Digital white board software yeFlow inoshanda!pro inosanganisa bhizinesi-chikamu chekuchengetedza nezviuru zvezvishandiso zvekudzidzisa uye maturusi ezvinyorwa kusimudzira nzira yekubatana nechikwata chako.
Qomo inopindirana flat mapaneru inounza kugona kumakirasi ako uye zvikwata kuti iwe ugone kutaurirana zviri nyore chero nguva.Iine yakareruka slim furemu dhizaini, Android kana Windows system sarudzo, yakamisikidzwa maturusi uye yakasarudzika mushandisi interface, ndiyo mhinduro yakakwana yekubatana kusina musono muchikoro nemuhofisi.
Kurongedza kwakajairika ndeye 1pc/1 katoni
Kana iwe uchida crate yehuni yekudzivirira kutakura kweLCL, unoda imwe mari.
Zvinotevera: Qomo Bundleboard flat mapaneru anoratidza
Zvakapfuura: Qomo QD5000 4K Desktop Gwaro Kamera
yakachipa interactive flat panel
Interactive flat panel mutengo
interactive panel mutengo